Adorable, uthandeka kanjani, ajabulisayo! Kungaba efiselekayo bahlinza epithets enjalo uma kuziwa idolobha elincane resort eningizimu yeFrance - Saint-Tropez. Khuluma mayelana kujabule izivakashi nabenzi bamabhayisikobho - nemnandi, ngakho Ngeke ngihlale eside phezu entry, futhi uqhubeke ngqo incazelo eningiliziwe nedolobha elihle.
Indawo resort abadumile
France, Cote d'Azuri Mediterranean Sea, 43 ° 16'00 "enyakatho nenkabazwe futhi 6 ° 37'99" longitude empumalanga - eyomile idatha ezindawo mayelana nendawo yokungcebeleka edume. Thola Saint-Tropez kumephu waseFrance akulula kakhulu. Lokhu edolobheni zikanokusho amancane phakathi omkhulu mislaid French Riviera futhi iseduze izikhungo mega zokuzilibazisa njengoba Nice futhi Cannes.
Kusukela Cannes eSaint Tropez amakhilomitha 41 nje kude futhi Nice kungaphezu - 90 km. Enye igama kumephu, ozokusiza ukuthola amehlo San-Tropes kuyinto Port Grimaud - edolobhaneni ebukekayo, zakhelwe phezu kwamanzi, wethiwa salokhu Venice Provence.
Kuyinto idolobha elinomlando omude. igama Its Saint Tropez ubophekile ukuba oNgcwele Omkhulu Martyr Torpisu ukuthi ezikhathini ezinzima ukushushiswa kwamaKristu ekhulwini ngase anqunywe ikhanda ngemiyalo yezikhulu umashiqela uNero. Futhi nakuba isijeziso iphutha endaweni of Pisa, emkhunjini kanye umzimba St Torpisa lwabakhafulela kuleyo ndawo, lapho kamuva akha okunethezeka resort yesimanje.
Ekupheleni kwekhulu xv. abanikazi San-Tropes kwavela umndeni Grimaud. Emlandweni edolobheni, ingenye usuku ukuthi ayegubha minyaka yonke udwendwe onesizotha ngokwesiko: e 1637 izakhamuzi Saint-Tropez kwawona ekuhlaseleni ngoxhaxha iSpanishi, eyayihlanganisa 22 galleons.
Ngasekuqaleni San-Tropes kwaba, kunalokho, akulona idolobha, kodwa ukudoba isiphetho abavamile, lutho ekhethekile livelele nakwamanye amadolobhana eziningi ezisogwini Provence. Painter Pol Sinyak wokuqala ukuthola ubuhle endaweni futhi bazinza lapha ngo-20 sika of leminyaka elidlule. Kusukela lapho njalo abameleli bohemia kwezobuciko ezaziwayo.
izivakashi zayo edolobheni linikeza uhlelo olunzulu futhi ezithakazelisayo kwamasiko. Kule ndawo into ukubona. Ngokwesibonelo, bonke izivakashi bavame ukuvakashela esiyingqayizivele butterfly Museum, elinikeza ezingaphezu kuka 4500 amakhophi lezi zinambuzane ezinhle, kuhlanganise nezinhlobo eziyivelakancane kakhulu futhi isengozini yokuqothulwa. Maison des Papillon ivulekele umphakathi kusukela ngo-Ephreli kuya ku-October.
Kubantu ukuthi kuningi art, kungenzeka ukuya Musée de l'Annonciade, lapho kukhona embukisweni emangalisayo imisebenzi ngabaculi ephefumulelwe emsebenzini ubuhle lezi zindawo. Kuyaziwa ukuthi abadwebi eziningi ezidumile futhi abanamakhono wayethanda uphile futhi usebenze e Saint-Tropez. Izikhangibavakashi ayigcini izimvemvane kanye namathafa kwezobuciko.
abahambi Enelukuluku ungavakashela Old Port, okuyinto isici esiphawula leli edolobheni. Lena indawo matasa kakhulu nge eziningi yezikebhe okunethezeka ufika ethekwini laseMessina ngesikhathi berths. Duzane kukhona amathilomu ezinkulu nezincane Chic izitolo, nokuhamba isixuku Motley ka abagqoke kahle. Ngqo ngaphezu port flaunts castle lasendulo Suffren. ukwakhiwa kwalo uqalwe emuva ngonyaka 980. Eceleni enqabeni lenzelwa isikhala esikhulu evulekile, okuyinto Museum zomlando phezu.
Nice esidlule cinematic
Njengoba sekushiwo, uma Saint-Tropez kwakungathandeki ngakho nezidumile. Kodwa ngo-1956, i-filmmaker edume Rozhe Vadim uqashe imuvi "UNkulunkulu Wadala Owesifazane" nge inimitable Brizhit Bardo e indima eyinhloko. Kusukela ngaleso sikhathi, leli dolobha uwile nenkazimulo, usebé mecca yangempela cinematic.
Esikhathini 60s kwekhulu elidlule e San-Tropes uchungechunge emangalisa isusiwe amahlaya French mayelana Amaphoyisa, lapho kudlalwa omunye osomahlaya best of sonke isikhathi - Louis de Funes. Futhi ngo-1968 ezikrinini emhlabeni ngaphandle ifilimu "okubhukuda" nge-Alain Delon futhi romi Shnayder ku izindima phambili, umphumela lokhu umphenyi futhi kwenzekani e Saint-Tropez. France bangaziqhayisa yefa lesizwe ezinjalo.
Konke lokhu omkhulu wamabhayisikobho ashisa izikhotha nje uyakhazinyuliswa kule ndawo. Idolobhana wakhethwa abahambi abacebile amatilosi. Manje ingenye zokungcebeleka yodumo futhi kuyabiza kakhulu emhlabeni, futhi abaningi iphupho okungenani oyedwa iso ukubona Saint-Tropez. Photo phezu inkumbulo, ngasendleleni, ungenza eduze esakhiweni esidala, lapho kwaku gendarmerie abadumile-movie ubudala.
San-Tropes: amabhishi, ukuyothenga nokuzijabulisa
Yiqiniso, kule ndawo yeholide ngasolwandle edolobheni has emabhishi amahle. Futhi kukhona kokubili zikanokusho sandy "zasendle", futhi yangasese ngokukhethekile ahlomele yachting, windsurfing, Ukushushuluza emanzini kanye neminye imisebenzi ezemidlalo. Okungabizi lolwandle angabhekwa Les Granier, itholakala phansi inqaba eduze kwechweba.
Kanebo lonke Gulf ligcwele encane ophithizelayo zokuvakasha: Bon-Teras, Cap-Saint-Pierre, Les Salins, Cap-Saint-Tropez kanye eTahiti-Plage. A amakhilomitha ambalwa uma usuka enkabeni yedolobha iyona edume emihlanu ikhilomitha Pampelonne Beach - yindawo lapho wamukela nihlambe topless.
ukuphila Stormy alupheli ehlobo e Saint Tropez ebusuku. Ukuze holidaymakers thola zokudla eziningi, amathilomu, umculo nemishayo, kuma-nightclub nasezindaweni disco. Ingabe yayithandwa kakhulu izihambeli lolwandle yokudlela "Club 55", lapho konke iyagcinwa cishe ngendlela efanayo njengoba ezinsukwini ukuqopha nge Brizhit Bardo. Papagayo Club ukubavakashela oqondayo tasters cocktail. I Apero & Umculo Phila Port njalo umculo, futhi kukhona osaziwayo emhlabeni.
Futhi e Saint-Tropez has a okukhulu ipaki kanye ezikhangayo esimanjemanje kakhulu. Ezinsukwini ezintathu ayinhloko edolobheni square kuyinto emakethe kuleli viki, lapho ungakwazi ukuthenga kwasolwandle fresh, ayi okuzenzela, ushizi, iwayini nokuningi. Kodwa abathengi kuleli dolobha resort has izitolo eziningi kangaka futhi boutiques, abathengi ngokuqinisekile ajabule.
Abavakashi ku inothi
abahambi abaningi abanolwazi belulekwa ukuba uvakashele Saint-Tropez akuyona ehlobo, futhi entwasahlobo noma ekwindla kule sizini velvet. Ngalesi sikhathi, kukhona abantu abambalwa, ngaphansi isiminyaminya sezimoto nolwandle wezindlu.
The yokungcebeleka engafinyelelwa ngemoto noma ngebhasi kusuka Nice Airport, okuyinto km 100 kusukela San-Tropes. Ikhumbula isiminyaminya ngesikhathi sasehlobo endleleni kungathatha 2 kuya ku-3 amahora. Ibhasi Saint Tropez kalula kusukela Saint-Raphaël, Cannes, Toulon futhi Nice.
Indlela yokuthola esitolo okunokwethenjelwa inthanethi